म अनी मेरा पल हरु!: Needed Help....!
बाँच्न कस्लाई रहर हुन्नहोला यहाँ ? उनिले के सोचिरहेकी होलिन, के उनको सपना थिएन होला लामो जिन्दगी जिउने ? उनको घर परिवारमा के बिती रहेको होला ? एकपल्ट मानबिय हैसियतले सबैले सहयोगको हात बढाउ । हामीलाई थोरै पिंडा हुंदा त काँप्छौ तर यी सुश्री कल्पना आले को दुई वटै किड्नी फेल हुँदा कस्तो महसुस् भएको होला ? त्यसैले सम्पूर्ण नेपाली बासीहरु जतिपनि हृदयलाई छुएर एकपल्ट सहयोग को हात बढाउन नभुल्नु होला । सहयोग पनि यो जीवनदान जस्तै हो त्यसैले तपाईंहरुले आफ्नो यथा शक्ती जीवनदान दिन नभुल्नु होला ।
यसलाई एउटा मानवताको हैसीयतले बिभिन्न माध्यम बाट प्रचार प्रसार गर्न पनि नभुल्नु होला ।
Labels: तस्वीर बोल्छ